झन्डै बनेकी ऋचा ‘धोकेबाज’  OnlineKhabar
झन्डै बनेकी ऋचा ‘धोकेबाज’
नायिका ऋचा शर्मा प्रेममा कति ‘धोकेबाज’ होलिन् ? प्रेम गरेर उनले धोका दिएको घटना होला कि नहोला ? यो त खुल्न सकेको छैन । नायक विनय श्रेष्ठसँग करिब ६ बर्ष प्रेम गरेकि ऋचा अहिले सिंगल रहेको बताउँछिन् । विनय र उनको प्रेम सहमतिमै छुटेको थियो । कहिलेकाही त ऋचा, घरमा बिहे गर्ने कुरा पनि आएकाले यसबारेमा सोच्न थालेको पनि बताउँछिन् ।
रियल लाइफमा ऋचा ‘धोकेबाज’ हुन् या होइनन्, यो उनलाई नै थाहा होला । तर, एक चलचित्रले झन्डै उनलाई ‘धोकेबाज’ बनाइदिएको थियो । चलचित्र ‘लभ सासा’मा नायिका शर्मा विशेष भूमिकामा छिन् । जहाँ, उनी चलचित्रका मुख्य कलाकार कर्माको पूर्व प्रेमिकाको भूमिकामा देखिएकी छिन् । चलचित्रमा कर्माले ऋचाको नाम मोबाइलमा ‘सीमा धोकेबाज’ भनेर सेफ गरेका हुन्छन् । चलचित्रमा ऋचाको नाम ‘सीमा’ हुन्छ ।
चलचित्र हेरिसकेपछि धेरैले उनलाई ‘धोकेबाज’ भनेर जिस्क्याए । तर, ऋचाका अनुसार, सुरुमा त चलचित्रमा पनि उनको नाम ‘ऋचा’ नै राख्ने तयारी गरिएको रहेछ । तर, ऋचाले नै यो नाम राख्न नदिएपछि ‘सीमा’ राखिएको रहेछ ।
ऋचा नै राख्दा आफूलाई सबैले ‘ऋचा धोकेबाज’ भन्न थाल्ने भएकाले नाम राख्न नदिएको ऋचाले बताइन् ।
२०७३ पुष २८ गते ०:१० मा प्रकाशित (२०७३ पुष २७ गते २०:०७मा अद्यावधिक गरिएको)
ठमेलमा साइकल र पैदलयात्रीलाई मात्रै प्रवेश अनुमति, सवारीलाई निषेध
केटी जिस्काएको आरोपमा म्हैपीमा गोली प्रहार, २३ वर्षीया युवती मुख्य डिजाइनर
चिनियाँ कम्पनीले व्यवस्थापक फेरेपछि भैरहवा विमानस्थल निर्माण तीव्र
रामेछापमा माओवादीका तीन नेताको बागी उम्मेदवारी !